GarsoorNews - AKHRISO Raga uma roona isxayeysiinta oo ah Warbixin laga qoray Madaxda Dalka
by Sacdiyo Ladan Maxamed | Sunday, Nov 26, 2017 | 167 views
Nin aad u jeclaa isxayeysiinta ayaa nin saaxiibkiisa oo dhaqankaas ku ogaa ayaa fariin u soo diray uu ku amaanayo isaga oo ku yiri ” waxaad tahay nin shabaaba oo geesiya oo naftiisa iyo maalkiisa u huray quruxda noloshiisa dambe oo da’ yaraantu aysan ka dhamaaneyn.”.
Ninkii ayaa wadanka uu degenaa kala kulmay dabagal aan dhamaad lahayn oo aan muuqan, naftiisana gelisey shaki lagu baadigoobayo.
Wuxuu fariin jawaabcelisa u diray saaxiibkiis wuxuuna ka codsaday inaad fariimahaaga iigu hadalqabsatid odeyga ama duqa, waayo waxaan dareemayaa duqnimo.
Saaxiibkiis oo yaaban ayaa yiri wax badan ayaa dhaqankaagi iska kaa bedeley. Saaxiibkiisa oo u soo jawaabey ayaa ku yiri ereybixinta xataa macnaha ay sameyneyso isbedel ayaa ku yimid.
Magacyo badan oo ay wataan madaxda dowladda waxaa hadda loola baxaa caruurta dhalata oo waalidkoodu taageersan yahay shaqsiyaadkaas ay ku samiyeen carruurtooda.
Wakhtiga isbedelayaa wuxuu xambaarsan yahay macno qiimahiisu ka duwan yahay sida horay looga bartay, wuxuuna waxyeelo ku noqda cid kasto si laablakaca dareenku u qaadsiyo iney qaadato waxeysan ka fiirsan.
Kooxda madaxtooyada maamusha shalay waxaa lagu taageerayey iney yihiin wadaniyaal naftooda u huraya danta dadka iyo dalka, maantana waxaa isi soo taraya xiriirka ay la leeyihiin Shabaab, khatarta deriska, iyo boqortooyooyinka yar yar ee Carabta, waxaana hadda sumad looga dhigaa iney yihiin koox isku baheystay qiyaanada qaranka.
Aniga oo amaanaya waxaan madaxdaas fariin ugu diri lahaa ” Waxaad tihiin koox ku walaalowdey iney naftooda u huraan shabaabnimadooda iyo jaceylka ku weyn si ay maslaxda ku jirta danta dadka iyo dalka si Soomaaliya ay u noqon lahayd boqortooyo Carbeed oo xiriir dhow la leh Yuhuuda iyo Mareykanka.”
Waxaa muuqata dad badan oo si niyadsamiya ku taageersan kooxda Qiyaano Qaran ineysan la socon isbedelada ku yimid madaxda sare ee dalka iyo danahooda qarsoon.
Waxaan shaki lahayn isbedelada mariinhabaabintu hogaamineyso iney dhabarjab dhaxalsiineyso muxaafid badan oo si niyadsamiya u taageersan madaxda sare ee dowladda.
Hogaamihii Kacaanka Oktober iyaa isagoon ka fiirsan dalka ka cirdeeyey Mareykanka 1969, wuxuuna soo dhoweeyey Ruushka, haddana 1977 ayuu Ruushka dalka ka cirdeeyey, wuxuuna soo dhoweeyey Mareykanka, taas oo dhalisay ugu dambeystii labada dal u hashiiyaan si xukunkiisa meesha looga tuuro kadib marka ay isbiirsatay siyaasadxumo dibed ka dhalatay oo dhalisay siyaasadxumo gudaha ah.
Taasi waa halis sidoo kale ku socota madaxda dalka oo siyaasadahoodu dibeda ay gebidhacleynayaan, kuna haminaya dalka iney ku xukumaan yaboohsiga ay heshiiska kula galaan boqortooyooyinka Carabta.
Waxaa sannadka cusub la gaarayaa biseyl ay dadku ku fahmaan dhagarta qarsoon ee kooxda qiyaano qaran ay hogaanka u hayso, waxaana maalin cad la caraabin doona kooxdaas oo isku duuban.
Inkasto hamigoodu yahay iney sii martaan shaqsiyaad magac ku leh madaxbanaanida siyaasda Soomaalida oo ay doonayaan iney ku laaluushaan qaab qabiil ama qaab kooxeysi diin ama qaab maalgelinaya danahooda gaar ahaneyd.
Waxaa balan u ah inta jecel horusocodka in laga dhabeeyo isbedel ku yimaada hogaanxumada dalka haysata iyo in jidka loo xaaro hogaamin cusub.